Ma run baa in 8 nin oo Soomaali ah ay doonta Finland ku kufsadeen haweenay? | Somaliska
Masheegi karo ragaan ineey wax xoogeen iyo inkale laakiin waxaan sheegi karaa doontaan dadka kora badankood ineey baashaal iyo shukaansi dartiis u koraan doontaan.
February 6, 2015 at 12:10
Mashiigi kartaa meelaha Laguqoray warkan sheegaya inay somali yihiin mise waxaa layidhi ayaad sooturjuntay
Arintaan haday jirto waa wax laga xumaado.Oo sumcad xumo noo ah. Waana ceyb aad u daran.Inaad xumeyso dad ku soo dhaweeyey.Jimcalow ma xaqiiq baa arintaan.soomaliyey arintaan noo soobaara.
Website yada cunsuriyiinta keliya kuqoronyihiin raga kufsiga geystay iney soomaali yihiin…
Wax lahuba maaha arrintaas in somali ay geesteen
police ka hadeey swedhish weeyo dhaheen soomaali muxuu kawadaa ninkaan waxay yihiin waa la ogaan doonaayee xaguu warka uusan hubin oola soo ordayaa mise soomaalida ayuu wixi xunba lajecelyahay iyo ceebaha.
Sida hadalkaaga kamuuqato wax cadeyn ah mahaysid Marka waxaan qabaa in lagafiicanyahy in aad sumcadeena kuciyarto ood tiraahdo somali ayay ahaayeen adigoon hayn wax habayaraatee cadeyn ah . Waxaa ilaquman jimcaalow inaad warkan meesha kasaarto oo markaad wax CAD hesho sooqorto mahadsanid
jimcaale beenta ka dhaaf somalida afkada wasaqda wixii xuun somalia miyaa aadiga cml miyaa u maleeysa mela shiidada caabo wasaq ah
meesha aad ka soo xigatay warkaan ma sheegi kartaa jimcaale si aan u ogaano warkaan in uu suganyahay adigoo mahadsan mise waa la qoraa iska soo qor waaye wepsitekaan
Somaliada ayaaba jeclaatay war aan sugneeyn in eey qoraan waayo waxeey doonayaan in eey akhrisayaashu u bataan mise waa been taas
jimcaalow beryahaan wax fiican ma heysid mar aad soo qorto kintir iyo haweeney la kufsaday ayan mowduuc ka dhigatay waxan kugula talinayaa wax dadka wax u tara soo qor.
As salamu Aleikum… Jicmaale bro horta webbkan waxuu ka mid yahay webbsatyada Somalida ugu fa idada badan. Mana ila qorxuuno in aad wax aadan hubin ku soo qorto. Mida kale Aftonbladet oo aan waxbo qarin ayaa horay i shegay in ay Swedish yihin oo ay ajanib ahayn. Marka Fadlan Sumacada Dhalinyarta Somalida haka dilin, ileen adigabo wad ka mid tahay. Mida kale commetska ugu badan waxeey ku waydiyeen mesha aad ka so citet ama xigasho ka soo sameysay ilaa hadane uguma adan jawabin. Koleey waxaan u fahmi jiray in aad svenska aqrin karto, lakin waxan ku fahmaya in aa gissa ama qayaas ku socoto. Warka Si qaldan uma ha ugu so qorin. Warka aad hubina ka daa. Please.
Inta ilaa hada aan soo ogaaday waa in ragga kufsiga lagu eedeeyay ay yihiin Soomaali, ilaa hada lama xukumin oo dambiga laguma cadeyn balse xitaa magacyadooda, halka ay deganyihiin iyo da’ooda ayaa internetka ku jidha.
Waxaan muhiim u arkaa in aan ka doodno dhaqanxumada iyo dhibaatada ku dhacday dhalinyarada Soomaalida iyo sidii aan uga wacyi galin lahayn arimahaan, ee aanan ku mashquulin waxyaabo kale. Mowduuc kasta oo aan soo qoro waxaan ku saleeyaa danaha akhristayaasha iyo in uu noqdo mid wax laga faa’ido. Mowduucaan aan ka faa’idno in aan ka hadalno arimahaan oo aan muhiimada siino in aysan dhicin Soomaali dambe oo kufsi lagu eedeeyay. Arintaas ayaa aad u muhiim ah !!!
Haddii dadka kufsiga ku kacay ay somali yihiin amaba dad kaleto way cadaan doontaan oo maxkamad ayaa eedeysanayaasha la soo taagi doonaa.saas awgeed yeynaan ku mashquulin ee aan ka war sugno
Jimcaale sxb sida laguu moodo iyo sida aad tahay waa mid aan isku qalmin.Wargeyska sida Aftonbladet ,raggas iney Swedish yihiin ayey qoreen adiga hadda warkaaga meel loo raaco malahan. Waxna nooma sheegin wax uun baad na weydiisay! Saxaafad dadka su’aal weydiineyso Somaliska ayaa lagu arkay.
koley kuwas waxan fila iney habargidir yihin sababto nimanka habargidir ayaa luguyaaqana waxaas,
Kkkkk waliged ayaaay ragga somaliyed wadar wax uu kufsan jiren maxaa doodan kulul idin galiyaay wax jira la sheege wiilka afka ha ku tagina
Alla ma habardugaagba
Bal ninkaan wayn wuxu kuhadlayo eega waa wax uu jeebkiisa kala soo baxay.dadkii wadanka udhashay baa leh wa swedish
war sugan bulshada usoo gudbi qoraalkaagana kumaad cadayn meesha aad kasoo xigatay balse waxaa u egtahay oo dhaqankooda leedahay dadka magaca soomaalida la sheegto oo ceebta iyo darxumada la jecel laakiin horaa loogu daalay saaxiib.
jimcaale beenta uku weneed manta soo qortay ee illahay kacabso wararka aad soo bad badineso dhaaf jimcaale intaat wararkan aadan soqorin kahor ayaan raadiyaha isweden qebta af somalika ka dhagestay waxena shegeen in aay yihiin iswiidhish marar badan ayaa warar lasoo dhafay gadaal ka buun buunisaa ee sida aan uku taxanaajiray mowduunyada aad soqorta waaba iska dhaafay beentada badan iyo waxyabaha aad ku darto oo buun buunin af ee wax sugan hadadan heynin iska aamus sidaas kuu qeeyroonee waxaan kaloo asaxaabta ku xiran webkaan ushegaa in aaysan soo boqan webkaan ee kador bidaan daariyaha iswedhan af somalika ah wana aad ogaan doontaa marka wararka aas kaso aqrisato kadibna laba maalin kadib cml uu been ku sodarayo ninkaan sidii ay eheena usheegayo
horta dadyohow idinka oo raali ah ma ogtihiin dadka sweden sharciga ku leh in lagu tilmaamayo swidhish saxaafada ma dhihi karaan waa soomaali wayoo sharci swidhish ah ayey heystaan
marka warka jimcaale waxuu noqon karaa 100% run
war adaa warka soo qoree dadka ha kubi ma runbaa maxay tahay managaa naqaan sxb warka soo qorayso iska hubi mise adoo hurdaysan ayaa qortaa sxb dad akhyaara ku xiram meshaan maamisha wax qanciya ekeen ama isba xir waa thanks
Malahuba warkan mise wa mid lagu cebenayo umada somaliyed
internet ayaa lagu qoray kulahaaa war waxaan wuxuu isku bedalay DAAHIR CALASOW
Najka isse says:
Oh ilkaha hadii la fago qurun baa ka yimadah Maa Runta La is Ku shego somaliyey wax walbo dhacah in somalida dusha laga Saro ama xun dhibteda ayey ledahay ee dhulka iniga is dhigay orda sidan is ku dhama